မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): July 2008
ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးများက ဝန်ကြီးချုပ်ကားကိုတား၍ အခက်...
အမေရိကန်သမ္မတကတော် မဲဆောက်လည်ပတ်မည်မစ္စ လော်ရာဘုရှ်
ဦးဂမ္ဘီရ ဦးဆောင်ဆရာတော် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ...
ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဘုရှ် က မြန်မာအတို...
ဒဂုံ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စင်ကာပူဘုန်းကြီ...
နေပြည်တော်ဝန်ကြီးများကို ရာထူးမှထွက်ပြီး နိုင်ငံရေ...
“ဟေ့ … သေလည်း မြန်မာပီပီ ဇာတိမာန်နဲ့ သေကြပါ။ ရန်သူ...
မြန်မာနိုင်ငံအား ငွေချေးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားသြူ...
ဧရာဝတီတိုင်း ရေလုပ်ငန်း နာလန်မထူနိုင်သေး
ဒီကေဘီအေနှင့်နအဖ ပူးပေါင်းတပ်များ ကေအန်ယူနယ်မြေမှ ...
ဒီကေဘီအေ၊နအဖ ပူးပေါင်းတပ်နှင့် ကေအန်ယူတပ်တို့ တိုက...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ကြံ့ဖွံ့ရုံးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ
အာဏာပိုင်တို့၏လာဘ်စားမှုကြောင့် တရားဝင်ပိတ်ထားသောဂိတ်မှ ထိုင်းဘက်သို့ တရားမဝင် သစ်ကားများ ဝင်ရောက်နေဆဲ
ဘုရားသုံးဆူ။ ။ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူဂိတ်ကို နေပြည်တော်၏အမိန့်ဖြင့် ပိတ်ထားသော်လည်း မြို့ပေါ် အာဏာပိုင်တို့က ၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သူများနှင့်လာဘ်ပေးနိုင်သောစီးပွားရေးသမားများကို ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ သစ်တင်သွင်း ခွင့် ပေးထားဆဲဖြစ်ပြီး ယင်းပိတ်ထားသောဂိတ်မှသာ ဖြတ်သန်းသွားနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း မြို့ပေါ်စီးပွားရေးသမားအသိုင်း အဝိုင်းမှ သိရသည်။
ယခု တစ်လအတွင်း ဂိတ်လမ်းကြောင်းမှ ထိုင်းဘက်သို့ သစ်ကား အစီးရေ ၆၀ နီးပါး ဖြတ်သန်းခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးသမား များက ပြောကြားသည်။ ယင်းသစ်ကားများကို ခလရ ၃၄ တပ်ရင်းမှူး ဒု ဗိုလ်မှုးကြီး အေးကိုကို၏အမိန့်ဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် သစ်ကားအစီးရေ ၃၇ စီး၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပါကေးများ တင်ဆောင်ထားသော ကားအစီးရေ ၁၈ စီးအား ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများ၏အဆိုအရ သိရသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:44 PM0comments
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ဒဏ်ရာဆိုတာ ရကြစမြဲပါ။ ဒဏ်ရာ(၂)မျိုး ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာရတဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ စိတ်မှာရတဲ့ ဒဏ်ရာ ဆိုပြီး ဒီလို (၂)မျိုး တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာရတဲ့ ဒဏ်ရာကို အချိန်မှီ ဆေးကုသမယ်ဆိုရင် ပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မှာရတဲ့ ဒဏ်ရာကိုတော့ ဘာနဲ့ ကုစားကြမလဲ။ ဒီနေရာမှာ ဗုဒ္ဓ၏ ဆေးနည်း ကတော့ ဘာဝနာတရားကို အခြေခံထားပြီး ကုစားရမယ်လို့ အဓိက ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ ဒဏ်ရာကို သမထဘာဝနာ ၀ိပဿနာဘာဝနာ (၂)မျိုးထဲမှ သမထဘာဝနာဖြင့် ကုစားရမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ သမထ ဆိုတာ စိတ်ကို ငြိမ်းအေးစေပြီး သမာဓိကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဘာဝနာ ဆိုတာ လွန်စွာအကျိုးများသဖြင့် မိမိတို့၏ သန္တာန်၌ အဖန်ဖန် ဖြစ်စေထိုက် ပွားများစေထိုက်သော တရားကို ခေါ်တာပါ။ ပူနေတဲ့ စိတ်ကို အေးအောင်လုပ်တာ သမထ၊ ပျံ့လွင့်နေတဲ့စိတ်ကို အာရုံတခုထဲ ဆွဲစုတာကို သမထလို့ ခေါ်တာပါ။ သမထ (၄၀) ရှိတဲ့အထဲမှာ မေတ္တာဘာဝနာ ဆိုတာ သတ္တာဝါအများကို ကောင်းစားစေလိုခြင်း၊ ချစ်ခင် မြတ်နိုးခြင်း သဘော ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေတ္တာပွားခြင်း မေတ္တာပို့ခြင်းဟာ စိတ် ဒဏ်ရာ အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ အကောင်းဆုံး ဆေးကုနည်းပါ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် လွတ်လပ်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ဒီမိုကရေစီ အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ထက်တိုင် ဒဏ်ရာပေါင်းများစွာ ရင်နင့်အောင် ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ န.အ.ဖ စစ်အာဏာရူး လူတစ်စု၏ လူမဆန်စွာ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် ညှင်းပမ်း သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် ရဟန်း ရှင် လူ ပြည်သူ အားလုံး ဒဏ်ရာကိုယ်စီ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ဆေးကုသလို့ ပျောက်ကင်းကောင်း ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မေတ္တာပို့သပြီး နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင် မြန်မာ့ပြည်သူများ၏ စိတ် ဒဏ်ရာကို ဘယ်လိုကုစားကြမလဲ။ ဗုဒ္ဓ၏ မေတ္တာတရား နဲ့ပဲ ကုစားကြမလား။ ဒီမိုကရေစီ မရမချင်း မြန်မာပြည်သူတွေ နေစဉ် ခံစားနေရမှာ ဒဏ်ရာ…..
Posted by Sanghaalliance at 9:38 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 9:16 PM0comments
ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးများက ဝန်ကြီးချုပ်ကားကိုတား၍ အခက်အခဲများတင်ပြ တောင်းဆို
လေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အမျိုးသမီးများက ဝန်ကြီးချုပ်စီးလာသည့်ကားကိုတား၍ လက် ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့်အခက်အခဲများကို တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာမြို့ပေါ်ရှိ (၃) မိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အမျိုးသမီးများက ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်း (၉) နာရီခန့်က နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် စီးလာသည့်ကားကို လေယာဉ်ကွင်းအပြန်တွင် ရှေ့မှရပ်၍ တားမြစ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
လပွတ္တာမြို့ပေါ်ရှိဒုက္ခသည်များကို စခန်းအာဏာပိုင်များက နေရပ်ရင်းပြန်ရန် အတင်းအကြပ် ဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အမျိုးသမီးများက ယခုကဲ့သို့ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျမတို့ပြန်ဖို့ဆိုတာက နေဖို့ထိုင်ဖို့ကလည်း အခက်အခဲရှိပါတယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း စိုးရိမ်ရတယ်၊ အခုလည်းကြားနေရတယ်၊ လေတွေတိုက်မယ် ရေတွေကြီးမယ်လို့ ကြားနေရ တော့ ထိတ်လန့်နေတယ်၊ ကျမတို့ နေဖို့မြေနေရာလေးနည်းနည်းလောက်ရရင် ဖြစ်ပါတယ်၊ ကြုံရာလုပ်စားပြီးနေမှာပါလို့ ပြောတာပါ” ဟု ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အမျိုးသမီးတဦးကပြောသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်အနေဖြင့် နောက်တကြိမ်ပြန်လာ၍ အခက်အခဲများကို ပြေလည်အောင်လုပ်ပေးမည် ဟု ပြောဆိုခဲ့ပြီး အဆိုပါနေ့က လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် အမျိုးသမီး များ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးတဦးက ဝန်ကြီးချုပ်ကားရှေ့မှရပ်ကာ တားမြစ် ခဲ့သဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ၎င်းအမျိုးသမီးနှင့် စကားပြောဆိုခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
ယင်းနေ့မတိုင်မှီ အခက်အခဲများကို တင်ပြပြောဆိုရန် စခန်းအတွင်းရှိ အမျိုးသားများက စီစဉ် ထားသည်ကို သတင်းပေါက်ကြားသွားသဖြင့် အာဏာပိုင်များက စုရုန်းခွင့်မပေးဘဲ ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ရဲ၊ ရယကအဖွဲ့ဝင်များက သူတို့တင်ပြပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း လေဘေးသင့်ဒုက္ခသည် တဦးကပြောသည်။
လပွတ္တာမြို့ပေါ်ရှိ လေဘေးဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ရွာသားများကို မြို့နယ်အာဏာပိုင်များက နေရပ်သို့ပြန်ရန် အတင်းအကြပ် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ပြီး မိမိဆန္ဒအလျှောက် ပြန်သည်ဖြစ်ကြောင်းကို စာရွက်များထုတ်ပေး၍ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်။
လက်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် နေထိုင်ကြသူများမှာ သက္ကယ်သောင်၊ ပြင်စလူ၊ ကိုင်းသောင်၊ လွှစာကျေးရွာများမှဖြစ်ပြီး (၅) မိုင်စခန်းတွင် လူဦးရေ (၅၀) ခန့်၊ ဘောလုံးကွင်းစခန်းတွင် (၃၀)ခန့်လောက်သာကျန်ရှိပြီး၊ (၃) မိုင် စခန်းတွင် (၂,၀၀၀) နီးပါးကျန်နေသေးကြောင်း ဒေသခံတဦး ကပြောသည်။
“ကျမတို့ကို ရဲမှူးက (၂၅) ရက်နေ့ကနေ (၃၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးဆင်းပေးရမယ်၊ ဆင်းမပေး ရင် တူးချင်းတပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ ရိုက်ခိုင်းမယ်၊ ခင်ဗျားတို့က သူများလှူတာတမ်းတာတွေနဲ့ တောင်းရမ်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားတွေလို့ပြောတယ်၊ ဒီ (၃) မိုင်စခန်းမှာလည်း နေလို့မရဘူး၊ အနီးနားက ကျောက်ဖြူ၊ ကျောက်မှော်ရွာတွေမှာလည်း သွားနေခွင့်မပြုနိုင်ဘူး” ပြောဆိုခဲ့ ကြောင်း (၃) မိုင်စခန်းမှ အမျိုးသမီးတဦးကပြောသည်။
အာဏာပိုင်များဘက်က ဒုက္ခသည်များကို လုံလောက်သည့် ထောက်ပံ့မှုများလုပ်ပေးနေသည် ဆိုသော်လည်း ဒုက္ခသည်တဦးအတွက် တရက်လျှင် ဆန်တဗူးခွဲ၊ ကုလားပဲ၊ ဆီနှင့် အိမ်ထောင်စု တစုအား ဆားတဇွန်းသာပေးသည်ဟု ဆိုသည်။
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူ အင်န်အယ်ဒီပါတီမှ ဒေါက်တာအေးကြူက “လတ်တလောကတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေက သွေးလွန်တုတ် ကွေး၊ ငှက်ဖျားရောဂါတွေဖြစ်နေတယ်၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါတော့ မရှိတော့ဘူး” ဟု ပြော ဆိုခဲ့သည်။
Posted by Sanghaalliance at 10:21 PM0comments
၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ တိုးတက်ရေး ပိုမိုကူညီမှု ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိ ကန်သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် လာမည့်လ (၇) ရက်နေ့တွင် မဲဆောက်မြို့ရှိ မယ်တော်ဆေးခန်းသို့ လာရောက်မည် ဖြစ် သည်။
ပြည်တွင်းက ကလေး (၁,၀၀၀) အတွက် လော်ရာဘုရ်ှတို့အဖွဲ့က မနှစ်ကစပြီး ထောက်ပံ့ကူညီမှု ပေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဒီက အခြေအနေကို လာရောက်လေ့လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ တယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
၎င်းကလေးငယ်များအတွက် ထောက်ပံ့မှုများကို နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ (IRC) မှတဆင့် မယ်တော်ဆေးခန်းသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်စပ်နှင့် ပြည်တွင်းမှ အဆောင်နေ မြန်မာကလေးငယ်များအတွက် သူမတို့အဖွဲ့မှ ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း မယ်တော်ဆေးခန်း
Posted by Sanghaalliance at 10:02 PM0comments
ဦးဂမ္ဘီရ ဦးဆောင်ဆရာတော် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး
ဘွဲ့အမည်။ ။ ဦးစန္ဒောဘာသ (ခ) ညီညီလွင်
ဦးဂမ္ဘီရကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့၌ ဦးမင်းလွင်+ဒေါ်ရေးတို့မှ မကွေးတိုင်း၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ ကိုင်းလယ်ကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း(၇)ယောက်ရှိပြီး ဦးဂမ္ဘီရမှာ (၅) ယောက်မြောက်ဖြစ်သည်။ အသက် (၅) နှစ်အရွယ်တွင် ပေါက်မြို့၊ အောင်တံခွန်ရပ်၊ အမှတ်(၄)မူလတန်းကျောင်းတွင် စတင်ကျောင်းနေခဲ့သည်။ သူငယ်တန်းမှ လေးတန်းအထိ၊ အတန်းစဉ်ပထမရကာ ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး၏ ချစ်ခင်မှုကို အထူးခံရသူဖြစ်သည်။ ကလေးစစ်သားဖြစ်ရသေး…..
Posted by Sanghaalliance at 9:16 AM 1 comments
Posted by Sanghaalliance at 9:07 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 11:52 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 10:47 PM0comments
ဒဂုံတက္ကသိုလ် မှ သို့ ပါမောက္ခချုပ်ဒဂုံတက္ကသို့(http://www.laminkhin.blogspot.com/) မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။
်ရက်စွဲ။ ။ 28-7-2008အကြောင်းအရာ။ ။
ကျောင်းဝင်းအတွင်း မလိုလားအပ်သော စည်းကမ်းများအား အတင်းအကျပ်လိုက်နာခိုင်းနေခြင်းများအား တားဆီးပါယ်ဖျက်ပေးပါရန်တင်ပြခြင်း။
အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ကျောင်းဝင်းအတွင်းကျောင်းသားကဒ်မချိတ်ပါက ” နောက်နောင် ကျောင်းသားကဒ်ချိတ်ပါမည်၊ ပါမောက္ခမှခေါ်ယုဆုံး မပြီးဖြစ်ပါ သည် ဟု ကိုယ်တိုင်ရေးသား ခံ ၀န် လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခြင်း၊ အကယ်၍့ ကျောင်းသားကဒ် မချိတ်ဆွဲပါက အဆောင်ထဲသို့ပေးမ၀င် ခြင်း။၄င်းအပြင် ကျောင်းအတွင်း အနက်ရောင်ပါသော အ၀တ်အစား မ၀တ်ရဟု စည်းကမ်း ထုတ်ခြင်း အကယ်လို့ ဝတ်ဆင်မိပါက ကျောင်းအတွင်းသို့ ပေးဝင်သော်လည်း အဆောင်အ တွင်း ပေးမ၀င်ပဲ စာသင်ယူခွင့် ကိုပိတ်ပင်တားဖြစ်နေခြင်း။စသည့် စည်းကမ်းချက်များသည် ကျတော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်မလိုလားအပ်သော စည်းကမ်းချက်များဖြစ်သည် ဟု ကျတော်တို့အနေဖြင့် သုံးသပ်မိပါ သည်။ သရုပ်ပျက်အ၀တ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုရဆိုသည့် စည်းကမ်းကို ကျောင်းသားအများစုမှ လက်ခံနိုင်ဘွယ်ရာရှိသော်လည်း မြန်မာ့ ရိုးရာ ၀တ်စုံဖြစ်သော ယောလုံချည်၊ ယော ထမီ တို့ ကို အနက်ရောင် ပါသည့် အတွက် ၀တ်ဆင်ခြင်းမပြု ဟုဆိုသော အချက်မှာ လည်း လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။ သို့ အပြင် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များသည် အေးချမ်းစွာ ပညာ သင် ကြား လိုသော ကျောင်းသားများ အား မကျေမနပ်ဖြစ်စေခြင်းမှ တဖန် ဆရာနှင့် တပည့် များ အကြား မလိုလား အပ်သော တင်းမာမှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။သို့ အတွက် တက္ကသိုလ်အဆင့် တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များ မှာ မလိုလားအပ်သော စည်းကမ်းများဖြစ်နေပြီးကျောင်းသားများ အတွက် လွတ်လပ်စွာ ၀တ်စား ဆင်ယင်ပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးနေခြင်းနှင့် ကျောင်းအတွင်းကျောင်းသားကဒ် မချိတ်ပါက အဆောင်တွင်းဝင်ပြီး ပညာသင်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခံရမည် ဆိုသည့်စည်းကမ်းသည်လည်း တက္ကသိုလ်အဆင့်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားများ အတွက် ကျောင်းဝင်းအတွင်းလွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ယူပိုင် ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်နေပါသဖြင့် ထိုသို့ အတင်းအကျပ် ပြုလုပ်ပြီး မလိုက်နာမနေရ စည်းကမ်းများ ချမှတ်နေခြင်းကို လာမည့်ကျောင်းသီတင်းပါတ်အတွင်း အမြန်ဆုံး တားဆီးပါယ်ဖျက်ပေး ပါရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ
Posted by Sanghaalliance at 10:32 PM0comments
၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
သို့သော် အသက်ကြီးသည့် လက်ရှိဝန်ကြီးတွေကို သက်ဆိုင်ရာဇာတိမြေ တိုင်းအလိုက် ကြံ့ဖွံ့ အသွင်ပြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဖွဲ့ဘို့ တာဝန်ပေးခြင်းဖြင့် ၀န်ကြီးရာထူး နေရာသစ်များ ပေါ်လာနိုင်သည်- ထို့ပြင် နောက်တက် ဗိုလ်ချုပ်များကို ၀န်ကြီးရာထူး ပေးနိုင်ခြင်း၊ အသက်ကြီး
၀န်ကြီးတွေကို အချိုသတ်ပြီး ရုံခါနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် နေပြည်တော် ၀န်ကြီးများ ရာထူးလက် လွတ်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ရမှာ ထိတ်လန့်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 10:14 PM0comments
“ဟေ့ … သေလည်း မြန်မာပီပီ ဇာတိမာန်နဲ့ သေကြပါ။ ရန်သူကမိရင် ‘လက်’ အားရင် လက်နဲ့ထိုး၊ ‘ခြေ’ အားရင် ခြေနဲ့ကန်ပါ။ နောက်ဆုံး ‘ပါးစပ်’ အားနေရင် ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ပြီးမှ ရဲရဲသာ သေပြလိုက်တာပေါ့။” (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း - ဟိုင်နန်ကျွန်း၌ စစ်ပညာသင်စဉ် ပြောကြားခဲ့သောစကား)
Posted by Sanghaalliance at 8:50 PM0comments
ညောင်လေးပင်တောရတိုက်၊ နာယကဆရာတော် ဦးအရိယမထေရ် (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ) ပြုစုတော်မူသော "၀ိနည်းစူဠ၀ါအရသာ" စာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော သပိတ်မှောက်ကံ (စာမျက်နှာ ၁၇၄ မှ ၁၇၈ အထိ) ကို ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
သပိတ်မှောက်ကံ ။ ။ ထိုအခါ ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီသည် မေတ္ထိယဘူမဇက ရဟန်းတို့၏ အဖော် ဖြစ်၏။ မေတ္ထိယဘူမဇက ရဟန်းတို့သည် ၀ဍ္ဎကို ဒါယကာ ငါတို့ကို မလ္လာမင်းသား ရှင်ဒဗ္ဗ ညှင်းဆဲသည်ကို သင် လျစ်လျူရှု၏။ "ယနေ့ ရှင်ဒဗ္ဗ သာသနာမှ ရွေ့လျောအောင် ဘုရားရှင်ထံ ဤသို့ လျှောက်လော" ဟု စေခိုင်း၏။ ၀ဍ္ဎသည် ဘုရားရှင်ထံ ချဉ်းကပ်၍ "မြတ်စွာဘုရား၊ ပရိတ်အိုး မီးလောင်ပါပြီ၊ ရှင်ဒဗ္ဗသည် တပည့်တော်၏ မယားကို ဖျက်ဆီးပါသည်" ဟု လျှောက်၏။ ဘုရားရှင် ခေါ်၍ မေးစစ်လတ်သော် မဟုတ်ရပါဟု လျှောက်ကြား၏။ ချစ်သားတို့ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် သံဃာသည် ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီအား သပိတ်ကို မှောက်လော၊ သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိသည်ကို ပြုလော။
ချစ်သားတို့ …. အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာအား သပိတ်ကို မှောက်အပ်၏။ (၁) ရဟန်းတုိ့အား လာဘ်မရအောင် ပြု၏။ (၂) အကျိုးမဲ့ ဘေးရန်ဖြစ်အောင် ပြု၏။ (၃)နေမြဲကျောင်း မနေရအောင် ပြု၏။ (၄)ရဟန်းတို့ကို ဆဲရေးကြိမ်းမောင်း၏။ (၅)ရဟန်းချင်း ကွဲပြားအောင် ပြု၏။ (၆)ဘုရားကျေးဇူးမဲ့ ဆို၏။(၇) တရားကျေးဇူးမဲ့ ဆို၏။(၈) သံဃာကျေးဇူးမဲ့ ဆို၏။ (၄) ချစ်သားတို့ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာအား သပိတ်ကို မှောက်ခြင်းငှာ ခွင့်ပြု၏။ မှောက်ပုံကား _ ဗျတ္တ ရဟန်းသည် သုဏာတုမေ စသော ဉ တ္တိဒုတိယကံဖြင့် သံဃာကို သိစေအပ်၏။ ၀ါ . ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီသည် ရှင်ဒဗ္ဗကို အရင်းမရှိသော သီလ၀ိပ္ပတ္တိဖြင့် စွပ်စွဲ၏။ သံဃာသည် ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီအား သပိတ်ကို မှောက်ရာ၏။ သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိသည်ကို ပြုရာ၏။ ပြပြီ ဟု ဆိုစေအပ်၏။
(ထာ …. အင်္ဂါရှစ်ပါးတို့တွင် တစ်ပါးပါးသော အင်္ဂါနှင့် ပြည့်စုံသူအားသော်လည်း သိမ်တွင်း၌ လည်းကောင်း၊ အိမ်ပသို့ သွား၍ မြစ်စသည်တို့၌ လည်းကောင်း မှောက်ခြင်းငှာ အပ်သည်သာတည်း။ ဤသို့ သပိတ်မှောက်ပြီးသောအခါ ထိုသူ၏ အိမ်၌ လှူဖွယ်ဝတ္ထု တစ်စုံတစ်ခုကို မခံယူအပ်။ ဤမည်သောသူ၏ အိမ်၌ ဆွမ်းမခံကြပါနှင့် ဟု တစ်ပါးသော ကျောင်းတို့သို့လည်း စေလွှတ်အပ်၏။)
(သာဋီ - ထိုသူလှူသော ပစ္စည်းကို မခံယူခြင်းငှာ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကမ္မ၀ါစာဖြင့် မှောက်အပ်၏။ အ၀အောက်ထားခြင်းဖြင့် မဟုတ်။ လာဘ်မရအောင် ဟူသည် ပစ္စည်းလေးပါ မရခြင်းငှာ၊ အကျိုးမဲ့ ဟူသည် ဘေးရန်ဖြစ်ခြင်းငှာ မကြီးပွားခြင်းငှာ။ ။ ၀ိဋီ - ကမ္မ၀ါစာဖြင့် သုံးဆောင်ခြင်းမရှိ၊ အစွမ်းဖြင့် မှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သပိတ်တို့ကို အ၀အောက် ထားခြင်းဖြင့် မဟုတ်။ ထိုကြောင့် သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိသည်ကို ပြုလော ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ထို ၀ဍ္ဎကို ကမ္မ၀ါစာဖြင့် သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိသည်ကို ပြုစေသတည်း ဟူလို။ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ဟူသော ဒဏ်အမှုကို ပြုရာ၏။ သပိတ်မှောက်ပြီးသောအခါ ထိုသူ၏ ဥစ္စာကိုသိ၍ ခံယူသူအား ဒုက္ကဋ်။ သုံးဆောင်ခြင်းမရှိသည်ကို ပညတ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကမ္မ၀ါစာဖြင့် သိစေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အဋ္ဌကထာ၌ တားမြစ်သောကြောင့် လည်းကောင်း ဒုက္ကဋ် ဟု သိအပ်၏။)
၀ဍ္ဎကန်တော့ခြင်း ။ ။ သပိတ်မှောက်ပြီးသောအခါ ရှင်အာနန္ဒာသည် ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီထံ သွား၍ "ဒါယကာ ၀ဍ္ဎ၊ သံဃာသည် သင်အား သပိတ်မှောက်ပြီ၊ သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိပြီ။" ဟု မိန့်ဆို၏။ ၀ဍ္ဎသည် "ငါအား၊ သံဃာ သပိတ်မှောက်ပြီတဲ့" ဟု ထိုနေရာ၌ မိန့်မော၍ လဲကျသွား၏။ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့က မစိုးရိမ်လင့်၊ ငါတို့ ကျေနပ်အောင် တောင်းပန်ကြမည် ဟု ဆိုကုန်၏။ ထိုအခါ ၀ဍ္ဎသည် သားမယား၊ ဆွေမျိုးသားချင်းနှင့်တကွ စိုသောအ၀တ် စိုသောဆံဖြင့် ဘုရားရှင်ထံ ချဉ်းကပ်၍ ခြေရင်း၌ ၀ပ်စင်း၍ - အစ္စယောမံ ဘန္တေ အစ္စဂမာ ယထာဗာလံ - စသည်ဖြင့် ကန်တော့၏။ ၀ါ မြတ်စွာ ဘုရား၊ မိုက်မဲ တွေဝေ သည့်အလျောက် အရင်းမရှိသော သီလ ၀ိပတ္တိဖြင့် စွပ်စွဲမိပါပြီ။ ထိုအပြစ်ကို နောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ သည်းခံတော်မူပါ ဟု ကန်တော့၏။
ဒါယကာ ၀ဍ္ဎ သင်သည် အပြစ်ကိုမြင်၍ တရားသဖြင့် ကုစား၏ ဘန္တေ မယံ ပဋိဂ္ဂဏှာမ။ တေ-သင်၏ တံ-ထိုအပြစ်ကို၊ မယံ ငါတို့သည်၊ ပဋိဂ္ဂဏှာမ-သည်းခံကုန်၏။ ဒါယကာ ၀ဍ္ဎ၊ အပြစ်ကိုမြင်၍ ဤတရားသဖြင့် ကုစားခြင်းသည် ကြီးပွားကြောင်း ဖြစ်၏။ နောင်အခါ စောင့်စည်းခြင်းသို့ ရောက်၏ ဟု မိန့်တော်မူ၏။
(သာဋီ - ငါသည် မသင့်သည်ကို ပြုမိပြီ။ ဘုရားရှင်သည်ကား များစွာသော အပြစ်တို့ကို သော်လည်း မကြံစည်မူ၍ ငါ၏အပြစ်ကို သည်းခံတော်မူလတ္တံ့ ဟု နှလုံးပိုက်၍ အစ္စယောမံဘန္တေ စသည်ဖြင့် ကန်တော့သည်။ ဉာယပဋိပတ္တိ - သင့်လျော်သော အကျင့်ကို လွန်၍ ဖြစ်သောသဘောသည် အစ္စယ မည်၏။ အပရာဓ မည်၏။ အပြစ် မည်၏။ မိမိကိုယ်တိုင် လွန်ကျူး၍ ဖြစ်စေအပ်သော အပြစ်သည် မိမိကို လွှမ်းမိုး၍ ဖြစ်လာသည် မည်၏။ အပြစ်ကို အပြစ်အားဖြင့် မြင်၍ တရားသဖြင့် ကုစား၍ နောင်စောင့်စည်းခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းသည် ဘုရားရှင် သာသနာ၌ ကြီးပွားကြောင်း ဖြစ်၏။ ဒေသနာကိုကား ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ ကုစား၏။ နောင်စောင့်စည်းခြင်းသို့ ရောက်၏ ဟု ဟောသည်။ ။ ၀ဍ္ဎ အစ္စဂမာသည် အတိကမ္မပ၀တ္တော လွန်၍ ဖြစ်လာ၏။ ဘန္တေ မယံ ပဋိဂ္ဂဏှာမ သည် တံတေ အပရာဓံ မယံ ခမာမ- သင်၏ အပြစ်ကို ငါတို့ သည်းခံကုန်၏။)
သပိတ်လှန်ခြင်း။ ။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့ကို ဤသို့ မိန့်တော်မူ၏။ "ချစ်သားတို့ --- ထိုသို့ ကန်တော့ခြင်းကြောင့် သံဃာသည် ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီအား သပိတ်ကို လှန်လော။ သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်းကို ပြုလော"။ ချစ်သားတို့ --- ရှစ်ပါးသော အင်္ဂါနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာအား သပိတ်ကို လှန်အပ်၏။ လာဘ်မရအောင် မပြု။ --- လ --- သံဃာကျေးဇူးမဲ့ မဆို။ ချစ်သားတို့ --- ဤအင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာအား သပိတ်ကို လှန်ခြင်းငှာ ခွင့်ပြု၏။
လှန်ပုံကား ။ ။ ထို ၀ဍ္ဎသည် သံဃာသို့ ချဉ်းကပ်၍ ပခုံးတစ်ဖက် စမ္ပာယ်တင်၍ ရဟန်းတို့၏ ခြေတို့ကို ရှိခိုး၍ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ လက်အုပ်ချီ၍ -- "အရှင်ဘုရားတို့ -- သံဃာတော်သည် အကျွန်ုပ်အား သပိတ်မှောက်ပါသည်။ သံဃာနှင့် မသုံးဆောင်အပ်သူ ဖြစ်ပါသည်။ အရှင်ဘုရားတို့ အကျွန်ုပ်သည် ကောင်းစွာကျင့်ပါသည်။ မာန အမွေးချပါသည်။ လွတ်မြောက်ကြောင်းကို ကျင့်ပါသည်။ သံဃာကို သပိတ်လှန်ခြင်းကို တောင်းပန်ပါသည် ဟု သုံးကြိမ်တောင်းပန်အပ်၏။ ဗျတ္တရဟန်းသည် သံဃာကို ဉ တ္တိဒုတိယကံဖြင့် သိစေအပ်၏။ ၀ါ - သံဃာသည် ၀ဍ္ဎအား သပိတ်မှောက်သည်။ သူသည် ကောင်းစွာကျင့်၍ သံဃာကို သပိတ်လှန်ခြင်းကို တောင်းပန်၏။ သံဃာသည် ၀ဍ္ဎအား သပိတ်ကို လှန်ရာ၏။ သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်းကို ပြုရာ၏။ ပြု၏။ ပြုပြီ" ဟု သိစေအပ်၏။
(ထာ-သပိတ်လှန်သောအခါ သုံးကြိမ်တောင်းပန်စေ၍ ဟတ္ထပါသ်ကိုစွန့်စေ၍ ဉတ္တိဒုတိယ ကံဖြင့် လှန်အပ်၏။)
(၀ိဋီ -လာဘ်မရအောင် မပြု စသည်တို့၌ လာဘ်မရအောင် ပြုခြင်းစသည်မှ ရှောင်ကြဉ်သည် ဟု အဓိပ္ပာယ်ယူအပ်၏။) (မပြုဘဲ နေရုံဖြင့် သပိတ်မလှန်ရ၊ ၀ိရတီကုသိုလ် ဖြစ်မှ ဟူလို။)
(ဆရာမြတ်တို့ကား --- ကိုယ်၊ နှုတ် မစောင့်သော ရဟန်းကို လက်ခေါက်လက်ပြန် လွန်ကျူးသူအား သပိတ်မမှောက်အပ်။ လဇ္ဇီရဟန်းအား လွန်ကျူးလျှင်သာ နောင်ယဉ်ကျေးခြင်း၊ စောင့်စည်းခြင်း။ အကျိုးမြော်ကိုး၍ ကရုဏာထားလျက် ၀ိရတီကုသိုလ် ဖြစ်အောင် မှောက်ရသည်။ ကန်တော့ပြီးလျှင်လည်း မမှောက်ရ။ အသမ္မုခကံရှစ်ပါး၌ ပါဝင်သောကြောင့် ပတ္ထပါသ်စွန့်စေ၍ ကမ္မ၀ါစာ ဖတ်ရသည်။ ။အင်္ဂုတ္ထိရ်၌ လူတို့အား လာဘ်မရအောင် ပြု၏ - စသည်ဖြင့် မလျော်သော အရပ်၌ လှည့်လည်၏။ တည့်၍နေမြဲမနေရအောင် ပြုခြင်း နှုတ်၌ အင်္ဂါရှစ်ပါး တစ်ပါးပါး ရှိသော ရဟန်းကို အပ္ပသာဒကံ ပြုကောင်း၏။ မကြည်ညို၊ မလှူလို၊ ရှိမခိုးလို ဟု ဆိုကောင်း၏။ နေကောင်း၏ ဟု ဟောသည် ဟူ၍ သုတ္တန်နှောကာ မိန့်ဆိုကုန်၏။)
Posted by Sanghaalliance at 8:42 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 8:39 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 8:35 PM0comments
ဒီကေဘီအေနှင့်နအဖ ပူးပေါင်းတပ်များ ကေအန်ယူနယ်မြေမှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာ
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ဗဟိုအထူးတပ်ရင်း (၂၀၁) တည်ရှိရာ ဝေါ်လေခီး
ဒေသအား တနင်္လာနေ့ နံနက် (၄) နာရီက ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖ ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ နယ်မြေသိမ်း ပိုက်နိုင်ရေးအတွက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များသည် ယမန်နေ့ည (၉) နာရီခန့်က ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားသည်။
ဒီကေဘီအေ တပ်ရင်း (၉၀၇) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် (၃၀) နှင့် မြန်မာစစ်တပ် ခမရ (၅၄၆) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် (၈၀) တို့က ဝေါ်လေခီးဒေသအား လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲကာလအတွင်း နအဖစစ်သည် (၂) ဦးနှင့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင် (၁) ဦး ကျဆုံးသည်။ ကေအန်ယူဘက်မှ
(၁) ဦးကျဆုံးကာ (၂) ဦး လက်ရဖမ်းဆီးခံရကြောင်း ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် တပ်မဟာ (၆) မှ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “မနေ့ည (၉) နာရီမှာ သူတို့ ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ့်နယ်မြေကို ပြန်ထိန်း ချုပ်လို့ရသွားပြီ။ အခု နေရာရှင်းလင်းနေတယ်။ နအဖစစ်သားအလောင်း (၂) လောင်းနဲ့ ဒီကေ ဘီအေ (၁) လောင်း ကျန်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဆုတ်သွားပေမယ့် မိုင်းတွေ အများကြီးထောင်သွားတယ်။ အဲဒါတွေကို လိုက်ရှင်းလင်းနေတုန်းပဲ။ အဖမ်းခံရတဲ့ ရဲဘော် (၂) ယောက်ကိုလည်း ရန်သူ့လက် ကနေ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဒီကေဘီအေ တပ်ရင်း (၉၀၇) အဖွဲ့သို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူတဦးက ယခု ဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သော်လည်း အသေးစိတ်အခြေအနေ
ကို ပြောကြားရန် ငြင်းဆိုသည်။
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တပ်ရင်း (၂၀၁) အခြေစိုက်ရာ ဝေါ်လေခီးဒေသ သည် မဲဆောက်မြို့မှ တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ (၄၀) အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ ။
Posted by Sanghaalliance at 8:58 AM0comments
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ၌ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း လိမ်ညာမှုများ ရှိသည်ဟု ပြောဆိုစွပ်စွဲကာ အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကြားမှ သမ္မတ နမ်ဘာရီး အန်ခါဘာယားက နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်။
“သမ္မတက ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေနှင့်အညီ ဇူလိုင် (၁) ရက် ည (၁၁း၃၀) မှ စတင်၍ (၄) ရက် ကြာ အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြေညာခဲ့သည်” ဟု နိုင်ငံတော်ပိုင် ရုပ်သံအစီအစဉ်မှ လွှင့်ထုတ် ကြေညာသည်။
ခွင့်ပြုချက်အထောက်အထားမပါဘဲ ည (၁၀) နာရီကျော် အပြင်ထွက်သူ မည်သူမဆို ဖမ်းဆီးခံ ရမည်ဖြစ်ပြီး လူစုလူဝေးမှန်သမျှ ဖြိုခွဲခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မွန်ဂိုလီးယားအစိုးရပိုင် ရုပ်သံမှလွဲ၍ အခြားသတင်းဌာနများကိုလည်း ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းနှင့် အစိုးရအဆောက်အအုံများကို ကာကွယ်ရန် လုံခြုံရေး ပိုမိုတင်းကျပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
ယခုလ (၂၉) ရက်၌ ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ၏ တရားဝင် မဟုတ်သည့် ပဏာမရလဒ် များအရ ပါလီမန် (၇၆) နေရာအနက် လက်ရှိအစိုးရ မွန်ဂိုလီးယားပြည်သူ့တော်လှန်ရေးပါတီ (အမ်ပီအာပီ) က (၄၆) နေရာ၊ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက (၂၁) နေရာ ရသည်ကို မကျေနပ်သူများက မြို့တော် အူလန်ဘာတာ၌ ယမန်နေ့က စတင်ဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်သည်။
အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအား ထောက်ခံသူများ ပါဝင်သည့် အဆိုပါ ဆန္ဒပြသူ (၆,၀၀၀) ခန့်က မြို့တော်အလယ်ရှိ အမ်ပီအာပီ၏ ဌာနချုပ်ရုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီး မီးသတ်သမားများ ကိုလည်း ကျောက်ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်။
ရဲများက ရာဘာကျည်ဆန်များ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများကို အသုံးပြု၍ နှိမ်နင်းခဲ့သော်လည်း အကြမ်း ဖက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်း၌ အကြမ်းဖက်မှုများသည် မြို့တော်၏ အခြားအစိတ် အပိုင်းများသို့ ကူးစက်သွားသည်။
ရဲစခန်းကိုပါ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ယင်းအကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြမှုကြောင့် ရဲ (၃၀) နှင့် အရပ် သား (၂၅) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အစောပိုင်းသတင်းများက ဖော်ပြသည်။
အနုပညာဆိုင်ရာပြခန်း၊ ပြတိုက်နှင့် ပြဇာတ်ရုံတို့ရှိသော ယဉ်ကျေးမှုနန်းတော်၏ အစိတ်အပိုင်း တချို့လည်း ယနေ့နံနက်တွင် မီးရှို့ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ နန်းတော်ဝန်းကျင်ရှိ အကြမ်းဖက်မှု နှိမ်နင်းရေးရဲများက ဆန္ဒပြသူများကို ဖမ်းဆီးနေပုံနှင့် ရာဘာကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်နေပုံတို့ကို ရုပ်သံသတင်းများတွင် ဖော်ပြသည်။
သမ္မတ နမ်ဘာရီး အန်ခါဘာယားက ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတကြောင်း ရုပ်သံ မှတဆင့် ပြောကြားခဲ့ပြီး အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင် ရှာခီးယား အယ်ဘဂ်ဒေါ့ အနေဖြင့် ပြည်သူလူထုကို အကြမ်းဖက်မှုများ ပြုလုပ်လာစေရန် မှားယွင်းစွာ ဦးဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲလိုက်သည်။
မစ္စတာအယ်ဘဂ်ဒေါ့က ဒီမိုကရက်များသည် အောင်ပွဲကို ဓားပြတိုက်ယူခဲ့ကြောင်းနှင့် မဲပေးသူ အများစုသည် ၎င်း၏ပါတီကို မဲပေးခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာလေ့လာသူများကမူ ယခုလ (၂၉) ရက် ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတ မှုရှိသည်ဟု မှတ်ချက်ပေးကြသည်။ ။
Posted by Sanghaalliance at 8:55 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:29 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:08 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 10:44 PM0comments
၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ယနေ့နံနက် (၆) နာရီ (၃၀) မိနစ်ခန့်တွင် အမှတ် (၆) ရပ်ကွက် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ကြံ့ဖွံ့ရုံးတွင် ဗုံးတလုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု တစုံတရာမရှိဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ကျောက် တံတားမြို့နယ် တာဝန်ကျ ရဲတဦးက ပြောသည်။
ဧပြီ (၂၀) ရက် က ရန်ကုန်တိုင်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် (၄) နေရာ၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်တို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Posted by Sanghaalliance at 10:41 PM0comments